नर्सिङ लाइसेन्स पास गर्न तीन लाख घुस, राजिस्ट्रारको नाममा यसरी मागिन्छ पैसा (प्रमाणसहित)
२९ फागुन, काठमाडौँ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण गराइदिने भन्दै काउन्सिलकी एक सदस्यले विद्यार्थीसँग घुस मागेको च्याट बाहिरिएको छ । दैनिकीले प्राप्त गरेको फेसबुक म्यासेन्जरको च्याट हेर्दा केही
नेपालको विकासे मोडेल कहिले परिवर्तन गर्ने ?
-पोष्ट केसी विश्वमान चित्रमा नेपाल एउटा कम विकसित राष्ट्रहरु मध्ये एक हो । यहाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार, बेरोजगार,सामाजिक विभेद, महिला हिंसा, दण्डहिनता, जस्ता सुचकहरु निकै कमजोर छन भने अहिले गरिवी
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा डर लाग्दो भ्रष्टाचार, उपप्रमुखको नक्कली दस्तखत गरेर रकम निकासा
२७ फागुन, डाेल्पा । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले नक्कली योजना अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी गरेको तथ्य खुलेको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत त्रिपुरासुन्दरी
२७ फागुन, काठमाडाैँ । वनस्पतिविज्ञ तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकले रोगसँग लड्ने प्रतिरोध क्षमता बढाउन नेपालमै पाइने जडीबुटी गुर्जोको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपालमा पाइने महवत्पूर्ण जडीबुटी गुर्जो हो ।
कोरोनाको त्रासकाबीच उल्लासमय फागु (फोटोफिचर)
२६ फागुन, काठमाडाैँ । फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको
७० करोड टेप प्रकरणः तथ्य एकातिर गोकुल बाँस्कोटामाथिको आरोप अर्कोतिर
-पवित्रा मुडभरी २५ फागुन, काठमाडौँ । आफ्नो बारेमा नैतिक प्रश्न उठे लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर छानविनमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा माथि
हाम्रो बुबाआमालाई के थाहा ? नारीदिवस भनेको पशुलाई घटस्थापनाको दिन जस्तै हो भनेर
-रोनी गुइडेल सुन्नुहोस न, मैले आज नारी दिवस मनाउनुहुन्छ कि हुँदैन भनिदिनुहोस् न किनकी म आज पर सरेकी छु; महिनावारी भएकी । अरु बेला म पर सरे भने मैले कुन
३४ विद्यार्थीको ब्लेडले हात चिरेपछि नुनखुर्सानी दल्न निर्देशन दिने शिक्षिकालाई बर्खास्त मात्रै ?
२४ फागुन, काठमाडौँ । नेपालको निजी शिक्षा यस्तो यातनापूर्ण बन्दै गएको छ कि अभिभावकहरू न बोल्न सक्छन न त कुनै विकल्प नै रोज्न सक्छन । आफ्ना बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि
१२ स्थानीय तह भएको नुवाकोटकामा १२ जनप्रतिनिधि ठेकेदार (सूचीसहित)
-प्रतिमा ढुंगाना २४ फागुन, नुवाकोट । राजनीति पेशा र व्यवसाय बन्दै जाँदा जनप्रितिनिधिको रूपमा निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)को संख्या पनि बढ्दो छ । नुवाकोट पनि ठेकेदारलाई जनप्रतिनिधि बनाउनेमा अग्रस्थानमै देखिएको छ
२३ फागुन, काठमाडाैँ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद नवराज सिलवालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अफ्रिकी नेता नेल्सन मन्डेलामा धेरै समानता रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा
२३ फागुन, काठमाडाैँ । काठमाडाैँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १० नेपालटारमा एक घरपेटीले दलित भनेर कोठा छाड्न दबाब दिएपछि महानगरीय प्रहरी परिसर बालाजुमा जाहेरी परेको छ । नेपाल ल क्याम्पसमा